Malunga nathi -Shenzhen Wofly Technology Co., Ltd.
Wofly yasekwa ngo-2011. Uye walonwabela igama elihle ngokubonelela uluhlu olupheleleyo iimveliso ezikumgangatho ophezulu izixhobo zegesi kubathengi bayo ehlabathini.
Uqalise kakuhle njengomenzi wezinto ezilawulayo, ukuphindaphindeka kwegesi, ukufakwa kweepayipi, izivalo zebhola, iivelufa zenaliti, ukujonga iivevini kunye nezivalo ezizodwa. Injongo yethu kukubonelela ngokuthembekileyo, ngokuchanekileyo kunye nomgangatho ophezulu weemveliso kumthengi wethu.
Lonke uyilo kunye nokuveliswa kweemveliso zikaWofly ngokungqongqo zihambelana ne-ISO. Ngaphandle koko, uWofly naye ufumene izatifikethi zeRohs, i-CE kunye ne-EN3.2 yeemveliso zayo zorhwebo kunye nezonyango.
Injongo yenkampani yethu kukubonelela ngenkonzo yobungcali efumanekayo kubaxumi bethu. Oku kufezekiswa ngezinto ezidityanisiweyo zokunyaniseka, ukuthembeka, kunye nolwazi lobungcali lweemveliso esizithengisayo. Ukwaneliseka kwabaThengi bekusoloko kuyeyona njongo iphambili kaWofly. Izabalazela ukwahlulahlula kwabanye abakhuphisana nabo ngokubonelela ngemveliso esemgangathweni ophezulu, amaxabiso okhuphiswano, kunye nokusebenza ngokukhawuleza kokuhanjiswa. Ngaphandle kweempawu zayo zabucala, iWofly ikwanikezela ngenkonzo ye-OEM / ODM kwinkampani eyaziwayo kwihlabathi liphela ukulungiselela iimfuno zabathengi ezahlukeneyo kunye nokunceda abathengi bethu baphucule ukhuseleko, ukhuseleko kunye nokufumaneka kweenkqubo zabo zegesi.
Ukuba ngu "One-Stop Stop Solution Provider" kubathengi bethu abaxabisekileyo kwaye kugqithise kulindelo lwabo kwiimveliso kunye nenkxaso.
Ukwandisa amandla ethu ngokukhula namaqabane ethu eshishini, sisebenzela abathengi kakuhle kwaye siphumelele kunye ekukhuthazeni ubudlelwane obusebenzayo bexesha elide
Qinisekisa inqanaba eliphezulu loncedo lwabathengi kuyo yonke indawo. Nika iimveliso ezisemgangathweni ngamaxabiso afikelelekayo. Ukunikezela ngeenkonzo zenkxaso yobugcisa kunye nemveliso. Ukugcina ukuhanjiswa kwempahla kwangexesha kunye nezinto ezikhoyo.
Njengogqaliso lweshishini lethu eliphambili kwiOfisi yeOfisi kunye neOnshore neGesi intsimi, Sizimisele ukwandisa eminye imveliso ukuze sihlangabezane ngcono neemfuno zabathengi bethu eziguqukayo kwaye sizibeke njengomdlali ophambili kule ndima.